Ungasusa kanjani izipele ze-TimeMachine | Ngivela kwa-mac
Ungasusa kanjani izipele ze-TimeMachine
U-Ignacio Sala | | I-Mac OS X, Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac
Izipele emhlabeni wekhompyutha yinto ehlotshaniswa nokuthula. Uhlelo ngalunye olusebenzayo lusinikeza uhlelo lokukwazi ukudala isipele ukuze kuthi uma kwenzeka kuba nephutha elikhulu kwi-hard drive yethu, ungalahlekelwa yiyo yonke imininingwane esiyigcine kuyo. Kepha lokhu akuwona umsebenzi wawo kuphela. Kuhlala kubalulekile ukwenza ibhekhaphu lapho sifuna ukufaka inguqulo yakamuva yohlelo olusebenzayo oluqaliswa yinkampani minyaka yonke uma kwenzeka kukhona okungahambi kahle kule nqubo futhi kufanele siqale ukufaka kusuka ekuqaleni ukufometha nokulahlekelwa konke okuqukethwe ifakiwe noma igcinwe ku-Mac yethu.
Kepha ngaphezu kwalokho, iTime Machine ilungele ukubuyisa amafayela esiwasuse ngengozi futhi angatholakali kunoma iyiphi inkomba ku-hard drive yethu. Inzuzo enkulu esinikezwa yiTime Machine uma iqhathaniswa nezinye izinhlelo zokusebenza zokwenza amakhophi wesipele yilokho singafinyelela amakhophi njengokungathi bekuyi-disk drive ukuze sikwazi ukubheka ngokuzimela futhi sibuyisele amafayela uma kunesidingo, into esingeke sikwazi ukuyenza nganoma iyiphi enye isoftware yokwenza amakhophi wesipele.
I-Apple yenza uhlelo lweTime Machine lutholakale kubo bonke abasebenzisi isoftware esivumela ukuthi senze amakhophi wesipele wakho konke okuqukethwe esikugcine kwi-Mac yethu.I-Time Machine iza ifakiwe ngokwendabuko kuzinguqulo zakamuva ze-OS X, kusuka kuyo ukuvela enguqulweni engu-10.5 ye-OS X ngo-2007, ebhabhadiswe ngegama elithi Ingwe. Isikhathi Somshini sakha izipele ezikhulayo zamafayela ezingabuyiselwa lapho kudingeka. Inzuzo enkulu esisinikezwa yona ukuthi singabuyisa ifayili, iqembu lamafayela noma lonke uhlelo.
I-Apple isinikeza izinketho eziningi uma kukhulunywa ngokwenza amakhophi wesipele nge-Time Machine:
Idrayivu yangaphandle exhunywe ethekwini le-USB esiteshini se-AirPort Extreme Base Station, ukuze sihlale sinawo wonke amachweba we-Mac yethu mahhala ngalokho esikudingayo.
Idrayivu yangaphandle exhunywe kwi-USB, FireWire, noma ichweba leThunderbolt IMac. Lesi sixazululo sishesha kakhulu futhi sishibhile ngoba okuwukuphela kwemali okufanele siyenze yi-hard drive.
I-Capsule Yesikhathi noma Iseva ye-OS X kunethiwekhi. Njengoba igama i-Time Capsule likhombisa, kufana ne-capsule yesikhathi lapho i-Time Machine yenza zonke izipele ezikhulayo ze-Mac yethu. Inzuzo enkulu lolu hlelo esinikeza yona ukuthi singayithola noma ikuphi endlini ngoba ukuxhumana kwayo ku-Wi- Fi. Ukwenza isipele sokuqala nge-Time Capsule, kungcono ukukwenza ngekhebula lenethiwekhi, ukuze inqubo isheshe kakhulu kune-Wi-Fi.
Njengamanje intengo yamadiski e-SSD yehle kakhulu futhi singayithola ngamanani ashibhile kakhulu. Ama-hard drive e-SSD asinikeza isivinini sokubhala nokufunda ngokushesha okukhulu kunama-hard drive wendabuko, yingakho abasebenzisi abaningi abakhetha ukuthuthukisa i-Mac hard drive yabo yalolu hlobo. Lolu shintsho lunikeza impilo entsha kwi-Mac yethu ngokunciphisa ngokuphawulekayo kokubili ukuqala kwe-OS X kanye nokwenziwa kwezinhlelo zokusebenza esizifakile.
Kepha futhi, uma sizothenga i-hard drive yangaphandle ukwenza amakhophi wesipele, kufanele sicabangele inketho yokuba yi-SSD, ngoba zombili isikhathi sokudala samakhophi wesipele sizoba sincane ngaphezu kokusivumela ukuthi sifinyelele kuzipele ezihlukile esizenzayo ngendlela eshesha kakhulu.
I-OS X ihlelwe ukuze njalo lapho sixhuma i-hard drive kwi-Mac's USB sibuze ukuthi ngabe sifuna ukuyisebenzisa ukudala amakhophi wesipele nge-Time Machine. Uma kucace ngaleso sikhathi ukuthi sifuna ukusebenzisa le hard drive ukugcina amakhophi wesipele, sizokhetha Sebenzisa le disc, uma kungenjalo, uma sixhume i-hard drive esifuna ukukhipha kuyo idatha, kufanele sichofoze Ungasebenzisi .
1 Isebenza kanjani i-Time Machine
2 Kungani amakhophi we-Time Machine ethatha isikhathi eside ukwenza
3 Ungasusa kanjani izipele ze-Time Machine
4 Ungasusa kanjani ifayela noma ifayela kusuka kuzipele ze-Time Machine
5 Sheshisa amakhophi ku-Time Machine
Isebenza kanjani i-Time Machine
Njengoba ngishilo ngenhla, iTime Machine uhlelo lokusekelayo lwe-OS X, ekunikeza ukuthi kungenzeka hlala uvikelekile noma iziphi izinguquko esizenzayo kwi-Mac yethu. ITime Machine yenza ikhophi eyisipele yamahora wokugcina angama-24 njalo ngehora, ibhekhaphu lazo zonke izinsuku zenyanga edlule, kanye nesipele samaviki onke ezinyangeni zokugcina. Njengoba idrayivu esiyisebenzisayo yokwenza isipele igcwaliswe, amakhophi amadala asuswa ngokuzenzakalela.
Kungani amakhophi we-Time Machine ethatha isikhathi eside ukwenza
Uma singakaze senze ikhophi eyisipele ku-Time Machine, kungenzeka ukuthi ikhophi yokuqala ithathe amahora ambalwa ukuyenza, kuya ngevolumu yamafayela esinawo nokuthi ayihlobo luni. Ukusekela amafayela angama-20.000 20.000 weZwi akufani nokusekela izingoma ezingama-3 ngefomethi ye-MPXNUMX. Inzuzo enkulu esinikezwa yiTime Machine ukuthi isipele ngasinye osenzayo sihlanganisa kuphela amafayela aguquliwe noma angeziwe kusukela kusipele sokugcinaNgakho-ke, lapho sesivele senza isipele sokuqala, okulandelanayo kuthatha isikhathi esincane kakhulu ngaphandle kokuthi sengeze amafayela wamavidiyo amaningi, azohlala ehlisa ijubane isipele.
Ungasusa kanjani izipele ze-Time Machine
Uma nganoma yisiphi isizathu sidinga ukususa noma yiziphi izipele ezindala, ngoba leyo hard drive ethile isetshenziselwa ukwenza eminye imisebenzi, singawenza lo msebenzi ngesandla ngaphandle kokulinda ukuthi i-hard drive igcwalise futhi singakwazi ukuyisebenzisela ezinye izidingo zethu.
Okokuqala siya kusithonjana se-Time Machine, esitholakala kubha yemenyu ephezulu futhi simelwe yiwashi le-analog elinomcibisholo ojikeleza ngokuphikisana nokuhamba kwewashi. Ngaphakathi kwemenyu yokudonsela phansi evelayo sizokhetha Faka Isikhathi Somshini.
Ngemuva kwalokho zonke izipele zizoboniswa ngokulandelana futhi lapho owokuqala kungowokugcina okwenziwe khona. Ngakwesokudla kwezipele kukhombisa usuku okwenziwe ngalo isipele. Ukuthola ikhophi esifuna ukuyisusa ngokushesha okukhulu, singaya engxenyeni efanele yesikrini bese siphenya usuku olukhonjisiwe.
Lapho iwindi le-backup esifuna ukulisusa selibonisiwe, sizocindezela isondo legiya bese siyakhetha Susa isipele. I-OS X izosikhombisa uphawu oluqinisekisa ukuthi sifuna ukususa isipele salolo suku. Ukukuqinisekisa, kufanele nje uchofoze ku-Yamukela.
Ekugcineni, ukuze uhlelo lususe leso sipele, esizothatha imizuzu embalwa, i-OS X izocela iphasiwedi yomsebenzisi wethu, ukuqinisekisa ukuthi singabasebenzisi abasemthethweni balezi zipele.
Ungasusa kanjani ifayela noma ifayela kusuka kuzipele ze-Time Machine
Inqubo yokususa noma yimaphi amafayela kusuka kuzipele Kucishe kufane njengoba ngichazile esigabeni esedlule lapho ngikubonise khona ukuthi singayisusa kanjani yonke isipele. Le nketho ilungile uma sifuna ukususa ifayela elinesisindo esimele kumakhophi wesipele futhi esivumela ukuthi sithole isikhala esingeziwe, njengokufaka noma ama-movie.
Okokuqala sizoya kusithonjana esimele iwashi elisendaweni ephezulu yemenyu bese ukhetha Faka Isikhathi Somshini.
Manje kufanele singene ngefasitela lokho ikhombisa isipele sakamuva kufayela esifuna ukulisusa.
Uma sesitholile kufayela okukhulunywa ngalo, kufanele sichofoze kulo bese sichofoza isondo legiya ukuze lisinikeze izinketho ezahlukahlukene esingazenza ngalo. Sizokhetha Susa wonke amakhophi ayisipele "efayela elikhethiwe noma igama lefolda". Ngale ndlela i-Time Machine izosusa noma ikuphi ukulandela umkhondo kuzo zonke izipele esikwenzele kuze kube manje kulawo mafayela noma amafolda.
I-OS X izosicela isiqinisekiso sokwenza ukususwa futhi izokucela futhi lokho ake ufake iphasiwedi yomsebenzisi waleso sipele, okusho ukuthi, iphasiwedi yethu.
Sheshisa amakhophi ku-Time Machine
Ngenhla ngiphawule ukuthi i-backup yokuqala esiyenza ne-Time Machine kungasithatha isibalo esikhulu samahora kuya ngokuqukethwe esikugcine ku-Mac yethu futhi esifuna ukukwenza kukho. Amakhophi akamuva njengokugxila kuphela kumafayili amasha isikhathi sokucubungula sincane.
Uma uvame ukwenza amakhophi wesipele ngalolu hlelo lokusebenza uzobe ukubonile lokho asazi ukuthi izipele zenzeka nini ngoba uhlelo lubeka phambili ukwenziwa kwezicelo kanye nokusebenza okujwayelekile kohlelo hhayi kubhekhaphu, okuthi ngaleso sikhathi kube sesibili.
Kwezinye izikhathi, sike saba nesidingo sokukopisha imininingwane eminingi kwi-Mac yethu futhi sidinga ukwenza ikhophi ku-Time Machine ngokushesha okukhulu. Kulezi zimo, singasebenzisa umyalo oguqula okuncamelayo kohlelo, unikeze i-Time Machine inani elikhulu lezinsizakusebenza, ngakho-ke ukusebenza kwe-Mac yethu kuzothinteka. Ukuze senze lokhu kufanele sivule iTheminali, bese sibhala umyalo olandelayo:
I-sudo sysctl debug.lowpri_throttle_enabled = 0
Uma usebenzisa inguqulo yakudala ye-OS X, ngaphambi kuka-El Capitan futhi umyalo ongenhla awusebenzi, zama ukufaka ipharamitha engu- w ukuze ibukeke kanjena:
I-sudo sysctl -w debug.lowpri_throttle_enabled = 0
Ukuze i-OS X yenze lolu shintsho, sizocelwa iphasiwedi yomsebenzisi futhi. Khumbula ukuthi lo myalo uyabuyiselwa emuva, kufanele nje sikwenze qala kabusha iMac ukuze isipele sibe inqubo yangemuva futhi
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac » Ungasusa kanjani izipele ze-TimeMachine
Sawubona ukuthatha izithombe noma amavidiyo ekusebenziseni kwekhompyutha i-Jing 2, etholakala ekhasini le-apula.
Kepha nginombuzo. Benginekhophi yami yomshini wesikhathi kudiski engama-200 gb kuphela, futhi manje ngifuna ukuyishintsha ibe yiCapsule, kepha angazi ukuthi ngikuthutha kanjani okuqukethwe. Bengikhethe ukwenza isipele ikhompyutha yami nediski yangaphandle efanayo (endala), kepha iyangitshela ukuthi ayinamandla anele. Futhi ngokuqinisekile-ke awukwazi ukubuyisa idatha. Uyazi ukuthi ungakwenza kanjani?
NGIYABONGA! Ngangivele ngihlanye ngifuna lolu lwazi! 😀
Ngizamile ukususa amafayela amakhulu kwizipele zami ze-TM ukuze "nginciphise" i-HD yangaphandle kepha angikwazi ukukwenza.
Lapho ngivula i-Backups.backupdb futhi ngifuna, ngokwesibonelo, umshini we-Windows XP we-VMWare Fusion, ohlala cishe ama-3 Gb kusipele ngasinye, awungivumeli ukuthi ngisuse noma yini. Kumenyu ye- «cogwheel» ngithola kuphela izinketho ezivamile: Ifolda entsha, vula, uthole ulwazi, uphinda ...
Iyiphi inguqulo ye-OS X oyisebenzisayo?
Kunzima kangakanani ukususa izipele ze-TM?
Nginemibuzo ethile ethize mayelana ne-TM:
- isipele ngasinye (njalo ngehora, samahora wokugcina angama-24; zonke izinsuku zeviki eledlule, njalo ngenyanga yonyaka odlule…) sigcina konke okuqukethwe yidiski yangaphakathi, noma kuphela amafayela aguqulwe kusukela ekugcineni kokugcina?
- uma ngine-TM ehlelwe ku-Yebo (izipele njalo ngehora), futhi nginqamula i-HDD yami yangaphandle?
- njengoba ngikuqonda, ngingawasusa wonke amafayela ami kumafolda amadokhumenti ami (ngenze isipele nge-TM ngaphambi kokuwasusa), ukukhulula idiski yami yangaphakathi (kuphela ngamafolda wohlelo nezinhlelo ezifakiwe), futhi ngithole amanye amafayela ayenakho kuzo?
- okuhlobene nombuzo odlule, ingabe isipele sisebenza njenge-disk yangaphandle? okungukuthi, ngingavula idokhumenti kwenye i-mac kusuka kudiski yami yokusekelayo ye-TM, noma ngaphandle kokuthi ngiyibuyisele kudiski yami yangaphakathi?
- ngezinye izinhlelo zokusebenza (ikakhulukazi i-Retrospect Express) (ifike ne-iomega yami yangaphandle ye-HDD) kungenzeka ukwenza amakhophi wokusekelayo (ama-backups) kumayunithi ahlukene (kulindeleke ukuthi omunye wawo ehluleke)… lokhu kungenziwa nge-TM?
ngiyabonga, ngiyethemba umuntu uzongiphendula
Sawubona, ngithole isisombululo esisheshayo, esilula futhi esisebenzayo futhi siqukethe, uma nje sixhume i-hard disk lapho wenze khona umshini wesikhathi, faka i-disk utility, khetha i-hard disk, ngokuchofoza phezulu ku-Dele, ezansi kwesokudla chofoza kusulwe naku-voila! =)
Ukuthatha ama-Time Machine captures: cmd + shift + 3 futhi isithombe esithunjiwe sesikrini sonke sigcinwa kudeskithophu.
Ngifuna ukwenza isipele amanye amafayela…. hhayi bonke !!!! ngenza kanjani
Ukususa amakhophi wesipele we-TM futhi uyihlanze njengosuku lokuqala, bheka i-athikili elandelayo ye-apula oyichaza kahle, futhi ayihlangene nokuphawula kwezinkundla ezisenetheni.
Uxolo kodwa isixhumanisi yilesi:
Ukunamathiselwa kwekhophi kwenzeke kimi iqhinga elibi ...
Abachazi ukuthi ngabe wonke lawo mafayela asusiwe aya kudoti. Ingabe ukususa lelo volumu ephezulu yamafayela kuDoti kuthinta ukugqoka okuqinile kwediski?
Futhi uma sibuza uSiri nge-WWDC, uzositshela?